Fanamafisana ny Semalta: Google Maps ho toy ny endrika vaovao amin'ny haino aman-jery sosialy
Tsy ela akory dia Google Plus no mpamatsy ny fampahalalam-baovao rehetrany orinasan-toerana. Na izany aza, Google My Business dia efa nandray ny vohikala ho an'ny tompona orinasa. Ny mpampiasa ankehitriny dia afaka mampiasa ny Google Maps mba hitovy amin'izanymiasa. Ny sasany amin'ireo SEO dia manazava ny Google Maps tahaka ny fampahalalam-baovao sosialy. Betsaka ny orinasa no nandray io fomba fanao io mba hanaovana sosialyNy teknolojia ara-barotra amin'ny media dia mamoa voa ao amin'ny Google Maps.
Google Maps dia tsy tranokalan'ny haino aman-jery sosialy fa misy ny fitoviana misy azysehatra media sosialy - free commercial appraisal. Ny tetika ara-tsosialy (marketing SMM) tradisiona mahazatra (SMM) dia mihatra amin'ny Google Maps toy ny tambajotra sosialy. Google Maps diany fahafahana hampitombo ny fahaizanao mihetsika.
Mpitantana Success Successor Semalt ,Nik Chaykovskiy manazava ireo endri-javatra hita ao amin'ny sarintany Google, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fitantanana ny mpanjifa.
Ny fanadihadiana ny orinasa iray amin'ny sarintany
Ny raharaham-barotra rehetra dia manana karatra, misy ny fampahalalana toy ny toerana misy ny toerana,fanavaozana mpanjifa, ary ny sarin'ny orinasa. Ao amin'ny ampahany ambony, misy ny famintinana ny fampahalalana toy ny sarimihetsika, tombanana amin'ny vidinydolara, ny kintan'ny mpampiasa, ny sehatry ny fandraharahana ary ny rohy ho an'ny toerana fialan-toerana. Ny saritany Google dia manome sehatra mitovy amin'ny irayho an'ny fampahalalam-baovao sosialy:
Hanavotana singa. Azonao atao ny mamonjy ny fikarohana na tranonkala mba hiantsoana azy any aoriana.
. Ity dia fanazavana momba ny fandraharahana mitovy amin'izany sokajy izanytonga any amin'ny toerana misy ny mpampiasa. Google dia manambara fa saika 80 isan-jaton'ireo no mikaroka avy amin'ny navigateur finday..Ity vokatra itydia manamafy ny filàna ny fanaovana ny tranonkala finday ho namana
alefaso amin'ny findainao. Ireo mpampiasa finday miaraka amin'ny kaonty Google dia afaka mampiasa io endri-javatra io mba hizaranarohy na toerana misy orinasa.
Share. Misy ny permalink manampy ny mpampiasa handefa ny fampahalalan'ny mpampiasa amin'ny hafatoerana. Azonao atao ny mampihena ny rohy amin'ny fampiasana ny code code Google manome
Ny lafiny sosialy amin'ny Google Maps
Nahita sary ny mpampiasa. Ny mpividy dia manana fahafahana hizara sary ao amin'ity fizarana ity.Misy toerana iray natokana ho an'ny mpampiasa. Ny mpampiasa dia afaka mitety orinasa na mamela fanehoan-kevitra. Ny mpampiasa dia afaka manangana sarintany manokanaizay ahafahan'izy ireo mampiditra ny "toerana" tiany toy ny orinasa.
Ny raharaham-barotra eo an-toerana dia tokony handrisika ny mpampiasa hanadihady orinasa Afaka mampakatra koa ny olonany sarin'izy ireo mba ahafahan'ny olona mahita maso ny zavatra antenainy. Arakaraka ny fisian'ny orinasa no manamarina, ny hahitan'ny orinasa bebe kokoato peer sharing. Ny orinasa dia afaka mihaino izay lazain'ny mpanjifa ary manao fanitsiana ilaina.
Google Maps dia fanoloana ny Google Plus Local. Tamin'ny voalohany dia nanantitrantitra ny famoronana i Googletambajotra sosialy eo an-toerana ho an'ny orinasa. Amin'izao vanim-potoana izao, ny sarintany Google dia mety hanana toerana mitovy amin'ny fiovana vao haingana ao amin'ny Google algorithm.Ny Google Maps dia mety tsy ho tambajotra sosialy fa manana fepetra sasantsasany mifandraika amin'ny varotra media sosialy. Ohatra, ny mpampiasa dia afaka mahazomampiroborobo ny orinasa sy ny serivisy amin'ny fampidirana toerana iray. Azonao atao ny manatsara ny SEO amin'ny fampiasana meta meta ary misy ny toerana sy ny karamaadiresy tarihina. Google dia mametraka sasantsasany amin'ny SEO eo an-toerana ary mametraka ny orinasam-pandraharahana amin'ny toerana misy azy. GoogleIreo sarintany dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny fampiroboroboana toy ny fampahalalam-baovao sosialy